China PP Bhodhoro IV Solution Kugadzira Line vagadziri uye vanotengesa | IVEN
IV Solution Kugadzira Line - Plastiki Bhodhoro LVP
Otomatiki PP bhodhoro IV mhinduro yekugadzira mutsara inosanganisira 3 seti michina, Preform / Hanger jekiseni muchina, Bhodhoro ichivhuvhuta muchina, Kushambidza-Kuzadza-Kuisa chisimbiso muchina. Iyo yekugadzira tambo ine chimiro che otomatiki, humanized uye akangwara pamwe yakatsiga kuita uye nekukurumidza uye yakapfava kugadzirisa. High kugadzirwa kunyatsoshanda uye pasi kugadzirwa mutengo, pamwe yepamusoro chigadzirwa inova yakanakisisa sarudzo IV mhinduro epurasitiki bhodhoro.
Preform / Hanger jekiseni muchina
+ Bhodhoro ichivhuvhuta muchina
+ Kushambidza-Kuzadza-Kuisa chisimbiso muchina
PP bhodhoro ichivhuvhuta muchina
Preform kurodha chiteshi:
Zvakawanda zve preforms zvinoiswa mukati me hopper, ipapo rotary preforms yekudyisa sisitimu inoratidzira preforms kuburikidza nekusimudza conveyor. Yakazvimirira yakatsemura kutsemura preform inodzorwa chinguva sikuru preform kurodha.
Kupatsanura kuronga, kutenderera, equidistance sikuru kuronga mashandiro e preform:
Iyo preforms yakakamurwa nehurefu hwakaenzana uye inopfuudzwa kune yakatwasuka rotary disk, ndokuzotenderedzwa ne180 degree uye woenda kune imwe yakatwasuka preforms kuronga disk. Hapana preform kuvharirwa uye hapana kutsauka ine chaiyo nzvimbo.
Kaviri mutsara kudziyisa mwenje bhokisi dhizaini, yakanaka kupisa kupisa, nyore kutsiva uye kugadzirisa.
Preform kutora, preform uye bhodhoro yekufambisa mashandiro:
Servo yakavhurika mhando servo inochinjika kutapurirana, iyo cam yekunamatira minwe isina epurasitiki chinyorwa uye upfu kuona chigadzirwa chigadzirwa.
Kuzvimirira chisimbiso uye kutambanudza mashandiro:
Iyo inotora yakasarudzika yekuisa chisimbiso yuniti dhizaini, iyo isinga pindire kune imwe neimwe. Kuiswa chisimbiso kwakanaka kufuridza bhodhoro, hapana kuvuza. Kutambanudza tsvimbo inotyairwa neimwe servo system.
Mould kuvhura uye kuvhara mashini:
Kana preforms ichiendeswa kune bhodhoro rinoputira chiteshi, servo system inofambisa ruoko rwekusimudza ruoko kuti isundire hinge yekuvhura nekuvhara kufamba kuti uwane zviitiko zviviri.
Mabhodhoro apera anotorwa kubva kunzvimbo yekufemera bhodhoro. Vanyengeri vekubatanidza michina vanovatora voendesa kuna Wash-zadza-chisimbiso muchina manejimendi kuti vaone auto kubatanidza kugadzirwa.
1.Servo kutyaira uye kugadzikana panguva yekumhanya-mhanya kufamba, iyo position iri yakarurama, yakasimba, uye yekugadzirisa mutengo wakaderera.
2.Iyo cam clamping zvigunwe pasina epurasitiki zvigadzirwa uye hupfu kuverengera chigadzirwa mhando.
3.High yekugona kugona: kutangira kubva ku4000-15000bottles paawa.
4.Closed yakakosha cheni dhizaini, chaiyo nzvimbo yepakati, mhete uye zvimwe zvekunze zvinhu hazvigone kupinda muketani, nyore kugadzirisa.
Kuiswa chisimbiso hakuiti mhepo kuburitsa, kunatsiridza ichivhuvhuta kunyatsoshanda, kupfupisa bhodhoro rinoumba nguva.
Item Muchina womuenzaniso
Kugadzira kugona 500ml 4000BPH 6000BPH 8000BPH 10000BPH 12000BPH
Kureba kwemabhodhoro eMax mm 240 230
Max preform kukwirira (nemutsipa) mm 120 95
Yakadzvanywa mweya (m³ / min) 8-10bar 3 3 4.2 4.2 4.5
Chilled Mvura (m³ / h) 10 ° C (kumanikidza: 3.5-4bar) 8HP 4 4 7.87 7.87 8-10
Mvura Inotonhora 25 ° C (kumanikidza: 2.5-3bar) 6 10 8 8 8-10
Kurema T 7.5 11 13.5 14 15
Saizi yemuchina (ine Preform kurodha) (L × W × H) (MM) 6500 * 4300 * 3500 8892 * 4800 * 3400 9450 * 4337 * 3400 10730x4337x3400 12960 × 5477 × 3715
PP Bhodhoro Kushambidza-kuzadza-yekuisa chisimbiso Machine
Bhodhoro rekupa chiteshi
Inotora chinongedzo chakanangana pakati pekuendesa nzira uye bhodhoro rekudhaya dhayiri vhiri, inosunga iyo bhodhoro kuti ibudise, nemhepo yakamanikidzwa yakamanikidzwa kuti ikurumidze kuendesa, pasina kukwenya.
Bhodhoro ionic yekuwachisa chiteshi
Iyo yekuchenesa musimboti uye maitiro ndeaya: kupidigura bhodhoro; iyo yekukweva pombi inokwira iyo cam yekuvhara iyo bhodhoro muromo; iyo ionic mhepo pombi inokwirawo kune bhodhoro nekamu; mweya wakamanikidzwa unoputirwa mupombi inovhuvhuta kuchenesa bhodhoro mubhodhoro;
Uye panguva imwe chete sveta zvidimbu zvakanyoroveswa mumhepo kubuda mubhodhoro.
Mabhodhoro epurasitiki akagezwa anoendeswa kunzvimbo yekuzadza neanogadzira, yekuzadza kamwene trace mabhodhoro epurasitiki ekuzadza. Chikamu chepamusoro chechiteshi chekuzadza chakashongedzwa neyakajairwa-kumanikidza mvura chiyero tangi. Kana iyo mvura ichizadza chiyero chetangi uye ichisvika padanho rekumisikidza, iyo mvura yekudyisa pneumatic diaphragm vharuvhu iri padhuze.
Kupisa kunopisa chiteshi
Chiteshi ichi chinonyanya kushandiswa kusungira-chisimbiso chivharo chepurasitiki infusion bhodhoro mushure mekuzadza. Inotora madhiraji ekudziya maviri kupisa makapu uye mabhodhoro emachira zvakasiyana, kupedzisa weld-yekuisa chisiri-chekubata hot-melt mhando. Iyo yekudziya tembiricha uye nguva inogadziriswa.
Bhokisi rekubuda chiteshi
Mabhodhoro akavharirwa anoendeswa kubhodhoro rinoburitsa track kuburikidza neabhotera kuburitsa chiteshi, uye wopinda mune inotevera maitiro.
1.With chaiwo kuzadza; mhepo chaiyo inodonhedza, inogona kudzora mwero wekushanduka kwebhodhoro mushure mekudzivirira.
2.Hapana bhodhoro risina kuzadza, hapana bhodhoro risina kukopa.
3.Iyo inogona kusvika kugona kusvika ku15,000BPH, zvinoenderana nechikumbiro chevatengi.
4.Pane mhando dzakasiyana dzemakepesi dzinogona kuiswa pane yekupedzisira bhodhoro: Yakavharwa Euro cap; Yakavharwa Irrigation cap; Screw cap; Kumisa uye Aluminium cap.
5.Iine yakakwana GMP-inoenderana yekuchenesa uye sterilization basa.
Kugadzira kugona 100ml 7000BPH 7000BPH 9000BPH 14000BPH
Inoshanda saizi yebhodhoro ml 50/100/250/500/1000
Kushandiswa kwemweya 0.5-0.7Mpa 3m3 / min 3m3 / min 3m3 / min 4-6m3 / min
WFI kushandiswa 0.2-0.25Mpa 1-1.5m3 / h
Machine uremu T 6 6.5 7 9
Saizi yemuchina mm 4.3 * 2.1 * 2.2 5.76 * 2.1 * 2.2 4.47 * 1.9 * 2.2 6.6 * 3.3 * 2.2
Simba rekushandisa Main mota 4 4 4 4
Kubata oscillator 0.5 0.5
Ionic mweya 0.25 * 6 0.25 * 5
Conveyor mota 0.37 * 2 0.37 * 2
Heating ndiro 6 * 2 6 * 2
Kugadzira mutsetse chinhu:
Inogona kusangana nekugadzirwa kwehukuru hwakasiyana (100-1000ml).
2.Iye yakanyorera ese maviri Standard PP bhodhoro uye Kuzvidonha-nyoro nyoro PP bhodhoro.
3.Apply kune akasiyana maumbirwo emidziyo: kutenderera, denderedzwa, zvisizvo, nezvimwe.
4.High kugadzirwa kugona: kubva 4000-15000bottles paawa.
5.Iyo yakashatiswa mbishi yekugadzira imwe 500 ml PP bhodhoro yakaenzana ne0%.
Pashure: Ampoule Kuzadza Kugadzira Line
Zvadaro: Isina-PVC Nyoro Bhegi Kugadzira Line
Ampoule Machine À Coudre Singer, Disposable Syringe & Tsono Production Line, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Ampoule Muchina À Coudre Led, Ampoule Machine À Coudre Bernina,